Shiinaha Midabka Thermochromic ee rinjiga thermochromic Thermochromic Ink Soosaarida Qalabka Warshad iyo Warshad | Topwell
Midabbada 'Themochromic pigments' waxay ka kooban yihiin maadooyin yar-yar oo beddela midabka beddelka. Marka heerkulka loo kiciyo heerkul cayiman midabku wuxuu u gudbaa midab ilaa midab la'aan (ama midab ilaa midab kale). Midabku wuxuu ku noqonayaa midabkiisii ​​asalka ahaa markii midabku qaboojiyey.
Heerkulka wax soosaarka waa in laga kontaroolaa wax ka hooseeya 200 ℃, ugu badnaan waa inuusan ka badnaan 230 ℃, waqtiga kululeynta iyo in la yareeyo waxyaabaha. (Heerkulka sare, kululaynta dheer waxay dhaawici doontaa astaamaha midabka ee midabka).
midab u dhigma
Midabka Thermochromic waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada dusha iyo dhexdhexaadka sida rinjiga, dhoobada, balaastikada, khafiifka, dhoobada, dharka, waraaqda, filimka synthetic, galaaska, midabka la isku qurxiyo, ciddiyaha, bishperka, iwm. khad, Shaashad
daabacaadda arjiga, suuq-geynta, qurxinta, ujeedooyinka xayeysiinta, alaabada lagu ciyaaro caagagga iyo dharka casriga ah ama wax kastoo male-awaalkaagu kuu qaado.
Caag ahaan: Midabka Thermochromic ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa wax lagu duro birta caagga ah ama waxyaabaha soo baxa sida PP, PU, ​​ABS, PVC, EVA, silikoon, iwm.
Wixii daahan: Midabka thermochromic ee ku habboon dhammaan noocyada wax soo saarka dusha sare.
Inks: Midabka thermochromic ee ku habboon dhammaan noocyada daabacaadda ee qalabka, oo ay ku jiraan dharka, warqadda, filimka synthetic, galaaska, iwm.
Guud ahaan Codsiga
* Ku habboon dabiiciga, ciddiyaha ama farshaxanka ciddiyaha kale ee macmalka ah. - Waaraa: Udgoon maleh, jawi wanaagsan, kuleylka si fiican uma caabiyo.
* Ku habboon Abuurista midab beddelidda tarmo thermochromic beddela midabka leh heerkulka guriga ama fasalka.
* Waxay ku habboon tahay daabacaadda dharka, daabacaadda shaashadda, khad iskaashi amniga ah.
Hore: Midabka midabka sawir qaadaha uv midabkiisu wuxuu u badalaa iftiinka qoraxda
Xiga: Midabka midabkiisu sarreeyo ee Uv ee daabacaadda kahortaga been abuurka
UV midab dhalaalaya u anti-been abuur p ...
Midab sawir qaade ah oo midabkeedu yahay midabka midabka badalan ...
Midabka midabkiisu yahay Uv ee ka hortagga been abuurka ...